editor — Wed, 12/13/2017 - 03:29
१) जीवनको करिबकरिब उत्तरार्धतिर पुग्नै लाग्दा भोगाइ, प्राप्ति र पीडाका विम्बमिश्रित ‘लेन्स’हरूले सुदूर बाल्यवस्थालाई हेर्दा कस्तो देखिँदो हो, तपाईंका आँखाबाट ?
– बाल्य जीवनका सुमधुर स्मृतिहरू अलौकिक आनन्दमा रुपान्तरण हुँदा रहेछन् । मीठो र अमूल्य वस्तु खोसिएको अनुभव हुँदो रहेछ । भोगाइ भन्ने सन्दर्भचाहिँ उकाली र ओह्राली गरिरहने निरन्तरको एउटा प्रकृया हो जो दोछायाँ बनेर प्रकट भइरहन्छ, जीवनको दसगजामा । कहिले प्राची, कहिले गोधूली, दुवै प्रकारको अनुभूति फरकफरक कालखण्डमा प्रकट भइरहँदा एकप्रकारले दर्दमय सुख प्राप्त हुने रहेछ ।
अमेरिकामा स्व. कविताराम श्रेष्ठको सम्झनामा श्रद्धाञ्जलीसभा
editor — Wed, 12/13/2017 - 03:09
अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रको भर्जिनियामा स्व. कविताराम श्रेष्ठको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली सभा सम्पन्न भएको छ l नेपाली साहित्यका वरिष्ठ साधक स्व. कविताराम श्रेष्ठको निधनमा अमेरिका नेपाल साहित्य प्रतिष्ठानले एक श्रद्धाञ्जली सभाको आयोजना गर्यो । सर्वप्रथम दिवँगत श्रेष्ठको तस्वीरमा पुष्पार्पण गरेपछि एक मिनेट मौन धारण गरिएको थियो ।
बादशाहको नयाँ परिधान
bheshraj71 — Wed, 12/13/2017 - 03:03
बाहिर भीडभाड र प्रतीक्षा
भित्र गफगाफ र ठट्टा
ढोकामा टाँगेर व्यस्त
के गर्दैछन् यिनीहरू
काम बाँडफाँड प्रमाण जोडजाम
कानुनी छिद्र प्रक्रियागत आधार
सेवा प्रवाहमा अर्पित
राष्ट्र सेवामा समर्पित ！
आरम गर्ने समय
सन्तलाल तामाङ — Wed, 12/13/2017 - 02:56
यामदास घायल 'सन्तलाल'
धेरै समय पछि, लगभग पाँच वर्षको अन्तराल पछि म आफ्नो गाउँ फर्किएँ । सुन्दरताले चकमन्न मेरो गाउँ । जहाँको सुन्दरताको धरातालमा टेकेर मैले मेरा आधा जिन्दगी काटेको थिएँ । तिनै माटोमा मैले सबै मेरा बाल्यकालका दिनहरू रोपेको थिएँ । त्यो भाष्मे पाखा, दाउबारी, डुण्डुप भिर, रातोमाटे डाँडा सबैका माटोहरुमा घस्रदै, चिप्लिदै र मुछिदै बिताएका थिएँ मैले मेरा बाल्यदिनहरु । त्यहाँका माटोहरुमा कति पसिनालाई रोपेर जीविका चलाएका थिए मेरा पुर्खाहरुले ।
dotpen — Wed, 12/13/2017 - 02:53
जन्म दिन परेको छ शुभ नै शुभ जीवन,
कति बिते र बाँकी छ कति गुन मनैमन ?
घट्यो सब्को दिनै आज गर भलो छिटै ज है,
सुयोग्य नाम राखेर इतिहास बनाऊ है ।
okhaldhungeyatr... — Wed, 12/13/2017 - 02:52
म त सोझो मान्छे अरुको भलो चिताइरहे
भविष्यलाई ख्याल गरिन वर्तमानमा रमाइरहे
तर हुदा रैछन यहाँ पछाडिबाट खुट्टा तान्नेहरू
जति तान्छौ तान खुट्टा मेरो जिन्दगी संघर्षमा बिताइरहे
तेजिन्द्र राना मगर — Tue, 12/12/2017 - 21:30
तेजिन्द्र राना मगर
तिमी हिड्ने म हिड्ने, बाटो फरक भए पनि
तिमी अनि मैले टेक्ने, माटो फरक भए पनि
दु:ख परे सम्झिनु, साथी बनी साथ दिउला
तिम्रो र मेरो जीवनको, पाटो फरक भए पनि
साहित्यकार गोविन्द गिरी प्रेरणाको चालीस वर्षे जोवन
editor — Sun, 12/10/2017 - 18:50
साहित्यकार गोविन्द गिरी प्रेरणाको चालीस वर्षे जोवनभन्दा पाठकवृन्दलाई अपत्यारिलो लाग्ला । उनको उमेरको कुरा गरेको होइन मैले । उनको लेखकीय उमेरको कुरा गरेको हुँ । उनले लेखेको पहिलो प्रकाशित रचना प्रकाशन भएको ठ्याक्कै चालीस वर्ष पुगेको छ । उनी ४० वर्षदेखि नित्य निरन्तर लेखिरहेका छन् । नेपालमा हुँदा मात्र होइन संसारको जुनसुकै कुनामा पुग्दा पनि उनको लेखनले थकाइ मार्दैन ।
एक शिक्षकको आत्मवृतान्त
editor — Sun, 12/10/2017 - 18:48
म जाजरकोट जिल्लाअन्तर्गत जगतिपुरको पाखाभित्तामा जन्मेँ । सानैदेखि कठोर जीवनको अनुभव संगाल्न पाएँ । परिवारबाटै शैक्षिक वातावरण भेट्टाएँ । असल आचरण सिक्ने अवसर पाएँ । भौगोलिक वातावरणले बनाएको कठोरपनलाई परिवारजनको कोमल व्यवहारले जित्यो । फलस्वरूप म स्वय म पग्लदै गएँ र कोमल बन्न पुगेँ ।
मेरो मनमा आफू जन्मे, हुर्के र पढेको ठाउँका लागि केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना पलायो । आमूल क्रान्तिकारी कदम चालेर प्रचलित मूल्यमान्यताहरूलाई एकै पटक उल्टाउने सोच त कदापि बनाइनँ । यद्यपि समाजको खाँचोबमोजिम नवीन कार्य गरी गाउँको ऋणको भार कम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जरुर सोच्न पुगेँ ।
Biju Subedi — Sat, 12/09/2017 - 00:11
उसको स्वभाव अलि विशेष किसिमको थियो । उसलाई देश र जनताको पीर लागिरहन्थ्यो । यसको समाधानका लागि बाटोमा हिड्दा केराको बोक्रा देख्दा पनि कोही लड्ला भनेर पञ्छाउँथ्यो । सडकमा ढुङ्गा देखे पनि गाडीले उछिट्याउला भनेर पञ्छाउँथ्यो । आफू बसेको ठाउँ वरिपरि झारपात पनि पञ्छाउँथ्यो । अफिसमा जाँदा पनि हाकीमको कामदेखि, कनिष्ठ कर्मचारीको काम तथा अफिसको हरेक काम कम्प्युटर गरी सहयोग गर्थ्यो ।
पाँच हाइकु (गन्तव्य टाढा)
jubhamakavreli — Thu, 12/07/2017 - 20:22
साथी मात्र समय
यात्रा क्रमशः ।
कर्णाली झैं सलल
ओरालो झर्दै ।
[email protected] — Mon, 12/04/2017 - 00:37
जति सुकै विद्वान भन
यहाँ भेदभाव रोकिएन
जति सुकै चाहना नभन
छोरा नभएसम्म रोकिएन
तेस्रो सन्तान पनि छोरी भयोभन्दा
अस्पताल एक परिवारको रोदनले गुन्जियो
अर्को परिवारमा हर्षोल्लास गर्जियो
पढ्ने बेला गोठाले र हली बसिएछ हजुर्
लेखकको जन्म पाठकको गर्भबाट
किन मर्यौ तिमीहरू
राष्ट्रभाषामा किन विवाद
राज्यको भाषिक नीति
पूर्वीय नाट्यसिद्धान्त र सहनशीला सुशीला
महाकविः अमेरिका र वेद मेहता
तिम्रो प्रेम वियोगमा
अँधेरीमा जून राम्रो
बहुचर्चित लेखहरूको संग्रह
चौबीसै घण्टा जहाजमा यात्रा !
साहित्यिक पत्रकारिताको कष्टकर यात्रा
साहित्यमा श्रम विषय
सन्दर्भ विश्व कविताको